Momba anay - Jinan Zhancheng Automation Equipment Co., Ltd.
Ny fanahin'ny fanavaozana, ny fiaraha-miasa ary ny kalitao no mitarika ny asantsika isan'andro. Ny ekipanay manan-talenta dia miara-mamorona sy manolotra vokatra sy teknolojia mitarika tsena eo am-panolorana serivisy tsy miovaova sy tsara ho an'ny mpanjifantsika manerantany. Izany dia mahatonga ny ZC LASER ho toeram-piasana mahafinaritra.
Jinan Zhancheng Automation Equipment Co., Ltd dia natsangana tamin'ny taona 2013. Natambatra ny teknolojia farany eto an-toerana sy eropeana, niangona niaraka tamin'ny ekipa teknika sy fitantanana matihanina fanta-daza.
Izahay dia namolavola ny zon'ny fananana ara-tsaina farany an'ny masinina fanamarihana laser, ny milina fantsom-laser, ny milina fanapahana laser sns .. Ny fitaovantsika dia manana ny toetrany amin'ny fisehoana tsara tarehy, fahombiazana milamina, androm-piainana lava, fanodinana avo lenta, vidin'ny fifaninanana. Hatramin'izao, ny orinasanay dia nahatratra mihoatra ny 50% ny fitomboan'ny varotra isan-taona, izay ambaratonga voalohany eto amin'ny firenena.
Manana andraikitra lehibe amin'ny fanatratrarana ny tanjontsika ny olona. Miezaka izahay hampiasa ny fahaiza-manao sy ny fahalalan'ny mpiasanay amin'ny tombony lehibe azon'ny fikambanana. Ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasa hafa no ivon'ny asantsika.
Ny tanjon'ny ZC LASER dia ny famokarana milina avo lenta sy milina manokana miaraka amin'ny haitao laser ho an'ny indostria amin'ny vidiny mirary. mahafaly ny fangatahan'ny mpanjifa vokatra sy serivisy avo lenta. Nanangana rafitra fitantanana kalitao sy serivisy serivisy aorian'ny varotra izahay. Afaka manome karazana fanohanana ara-teknika sy serivisy aorian'ny varotra ho an'ny mpanjifa izahay, ary manome vahaolana feno amin'ny fikarakarana laser ho an'ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany.
Ny orinasanay dia nifikitra hatrany tamin'ny "tsena miorina amin'ny fivelomana, ny kalitaon'ny fahavelomana, ny serivisy ho an'ny fampandrosoana, ny filozofian'ny orinasa Professional Brand" ary manitatra mavitrika ny tsena anatiny sy ivelany.